लामखुट्टेले तपाईंलाई अरुलाई भन्दा धेरै टोक्नुका पाँच कारणः टोकाइबाट बच्ने चार तरिका | Ratopati
personएजेन्सी exploreकाठमाडौं access_timeचैत ३, २०७७ chat_bubble_outline0
गर्मी महिना सुरु हुँदैछ र यो मौसम लामखुट्टेका कारण धेरैजसोको अप्रिय बन्ने गर्छ । के तापईंले याद गर्नुभएको छ ? लामखुट्टेले केही विशेष मानिसलाई बढी टोक्ने गर्छ । तपाईं कोही साथीसँग कतै पार्कमा घुम्न जानुभएका बेला लामखुट्टेले कसैलाई बढी नै टोक्ने र कसैलाई अलि कम टोक्ने गर्छ । लामखुट्टेले केही मानिसहरुलाई किन विशेष निशानामा पार्छ ? यसबारे हामी जानकारी दिँदैछौं ।
तपाईंको मेटाबोलिक एक जटिल विषय हो । तर यसले तपाईंको शरीरद्वारा उत्सर्जन गरिएको कार्बन डाइअक्साइडलाई निर्धारण गर्छ । कार्बन डाइअक्साइडको गन्ध पनि लामखुट्टेलाई तीब्र रुपमा आकर्षित गर्छ ।
पोथी लामखुट्टेले आफ्नो इन्द्रियमार्फत् कार्बन डाइअक्साइडको गन्ध पहिचान गर्छ । एक शोधका अनुसार गर्भवती महिला सामान्य मानिसको तुलनामा २० प्रतिशत बढी कार्बन डाइअक्साइड रिलिज गर्छिन् । यसैकारण लामखुट्टेले उनीहरुलाई बढी नै टोक्छ ।
तपाईंको छालामा विभिन्न प्रकारको ब्याक्टेरिया लुखेको हुन्छ भन्ने कुरा तपाईंलाई थाहा छ ? वास्तवमा यो त्यति खराब पनि होइन तर यसले लामखुट्टेलाई तपाईं भएठाउँ आउन आमन्त्रण गर्न सक्छ । हालै गरिएको एक अनुसन्धान अनुसार लामखुट्टेलाई केही विशेष प्रकारको ब्याक्टेरिया भएको मानिस बढी मनपर्छ । जो व्यक्तिको छालामा विभिन्न प्रकारका ब्याक्टेरिया पाइन्छ, उनीहरुमा लामखुट्टेको हमलाको सम्भावना कम नै हुन्छ ।
विभिन्न अनुसन्धानका अनुसार ‘ओ’ रक्त समूह भएका मानिसतर्फ लामखुट्टे सामान्य मानिसहरुको तुलनामा बढी नै आकर्षित हुने गर्छन् । दोस्रो नम्बरमा आउँछ ‘ए’ रक्त समूह भएका मानिसहरु । यी दुबै रक्त समूह लामखुट्टेका लागि कुनै चुम्बक झैं काम गर्छ ।
हल्का रङको कपडाः
लामखुट्टे कुनै खाल्डो, झाडी वरिपरि हुर्कने गर्छन् । तपाईंसम्म पुग्नका लागि उनीहरु गन्ध र दृष्टिको संयोजनको प्रयोग गर्छन् । त्यसकारण यसबाट बच्नका लागि सकेसम्म हल्का रङको कपडा लगाएर बाहिर निस्कनुहोस् ।
लामखुट्टेलाई तपाईंको शरीरको पसिना र ल्याक्टिक एसिड निकै मनपर्छ । त्यसैले जब तपाईं व्यायाम गर्न बाहिर निस्कनुहुन्छ तब घर आएपछि सकेसम्म छिटो नुहाउनुहोस् । साथै वर्कआउट सुरु गर्नुअघि आफ्नो वरिपरी किट निवारकको प्रयोग गर्नुहोस् ।
एक अनुसन्धानका अनुसार लामखुट्टेलाई बियर पिउनेहरुको रगत पनि निकै मनपर्छ । त्यसैले या त बियर पिउनबाट जोगिनुहोस् वा पार्टीमा तीब्र गतीमा चल्ने पङ्खाको बन्दोबस्त मिलाउनुहोस् । लामखुट्टे हावाको तीब्र गतिमा उडान भर्न सक्षम हुँदैनन् ।
सबै घरमा विभिन्न प्रकारका कीटनाशक हुन्छन् । केही कीटनाशकले लामखुट्टेलाई घरबाट भगाउन सफल हुनसक्छन् । तपाईं यस्ता कीटनाशकको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।